Maalinta: Oktoobar 6, 2017
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa bayaan ka soo saaray ajendaha kulanka Tifaftiraha Hay'adda Anatolia. Wasiir Arslan wuxuu yiri: 3. 68% xaqiijinta waxaa lagu gaadhay dhismaha garoonka diyaaradaha 2018-aad ee Istanbul. Gegada diyaaradaha, ugu horreeya bisha Febraayo XNUMX [More ...]
Qof ku sugan Adana, gaari kale oo rakaab ah, kaameeraha taleefanka gacanta, ayaa dabka ka qaadaya baraha bulshada wuxuuna ku dhawaaqay ogeysiiska Sida laga soo xigtay macluumaadka la helay, dhacdadan ayaa ka dhacday degmada Seyhan, xaafada Kurtuluş. Garda [More ...]
Xageebaan ka heleynaa xadiidka tareenka ee Aksaray?
Warbixinta EIA ee mashruuca Tareenka Kşrşehir-Aksaray-Ulukışla, kaas oo lagu gaari doono gaadiidka rakaabka iyo xamuulka ka keena Aksaray, ayaa la soo gabagabeeyey. Warbixinta EIA sidoo kale waxay bixisaa macluumaad ku saabsan halka khadka tareenka uu dhaafi doono iyo halka saldhigga tareenka uu ahaan doono. [More ...]
TCDD Dhismayaasha Hagaajinta Hoose iyo Korriinka ee Bozuyuk
3 xad-dhaafyada iyo marinnada ay ka fulin doonaan Agaasimaha Guud ee Waddada Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) ee Bozüyük ayaa la socda howlo dhismeedka xad-dhaafka ah oo isku xiri doona Xaafadda Yeşilkent iyo 4 Eylül Neighborhood. [More ...]
TCDD iyo jidadka 1340 Qorista Shaqaalaha
KGM iyo TCDD ayaa la rajaynayaa inay shaqaalaysiiyaan shaqaalaha. Shaqaalaysiinta 640 shaqaale ah wadooyinka waaweyn iyo qoritaanka TCDD 700 oo shaqaale ah ayaa la codsaday wareysi la'aan. Jidadka waaweyn iyo Wadooyinka Tareenka marka shaqaale dawladeed uu iibsado? Jidadka Guud ee Wadooyinka [More ...]
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Republic of Turkey Tareennada State ku dhawaaqday 1118-qorista looga dhigi doonaa. Wasiirka Gaadiidka Ahmet Arslan State Railways ayaa u qeybiyey labo qaybood sida kaabayaasha iyo gaadiidka [More ...]
Xarunta tareenka Kalluumeysiga ee Hoyga Kalluumeysatada, oo ku taal qaybta bari ee khadka taraammada ee ay maamusho Nidaamka Waddooyinka Mara ee Samsun Light (SAMULAŞ), muddo badan ma aysan shaqeyneyn. Tallaabooyinka la qaaday si loo joojiyo nabadgelyada dadka deggan [More ...]
Salih Zeki Murzioğlu, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimeyaasha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Samsun (TSO) ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay bilaabaan Tuulada Saadka, oo dhisme ka socota degmada Tekkeköy ee Samsun ayna heshay deeq lacageed oo dhan 54 milyan. [More ...]
AySirar oo loo yaqaan 'IISPARK' ee Ajaanibta ah!
Xubin ka tirsan Golaha IMM Zeynel Y Assemblylmaz, CHP, wuxuu af ahaan u aqriyay soo jeedinta Golaha wuxuuna u keenay labo dhacdo oo aan wanaagsaneyn ajandaha kulanka: Dhul gaar ah oo ay iska leedahay shirkada gawaarida gaarka loo leeyahay ee İSPARK [More ...]
Madaxweynaha AKP ayaa booqday KOS
Mashruuca Belgrade Decovil Line oo uu weheliyo Fazlı Kılıç, Duqa magaalada Kağıthane iyo Hüseyin Irmak, Lataliyaha Saxaafadda iyo Taariikhda ee degmada Kağıthane [More ...]
CHP Istanbul kuxigeenka Asst. Jiraan barta. Dr. Gülay YEDEKCİ wuxuu uxoogtay dhibaatadii reer Istanbuul ajendaha shirka. DAQIIQADII 30 WAA KU FUDUD IN ISTANBUL [More ...]
RayHaber 06.10.2017 Warbixinta Shirka
Jan Waxaan jeclaan lahayn inaan halkan xoogaa maalgashi ku sameysanno annagoo ku hadlaya magaca Boqortooyada Ingiriiska, Sayidku wuxuu yiri Sayid Janvrin, Safiirka Ganacsiga ee Boqortooyada Midowday, oo u yimid inuu arko waxa ay Degmadda Tepebaşı ka qabtay tamar waarta iyo magaalada caqliga leh. Boqortooyada Midowday [More ...]